Vaovao - Ahoana ny fomba hampihenana ny vidin'ny milina fanasana atody?
Ahoana ny fomba hampihenana amin'ny fomba mahomby ny vidin'ny fampiasana ny milina fanasana atody?
Ahoana ny fomba hampihenana ny vidin'ny milina fanasana atody. Ny milina fanasan-tsinay dia manana rafitra matanjaka, fampisehoana marin-toerana, tsy misy fanatodizan'ny atody, tsy milatsaka atody, androm-piainana maharitra. Miaraka amin'ny borosy nylon manokana, fanadiovana automatique automatique, izay tanteraka amin'ny fampiharana amin'ny famatrarana atody sy ny fonosana ary ny fahombiazan'ny famokarana avo. Ka ahoana no ahafahantsika mampihena ny vidin'ny fampiasana fanasana atody?
1. Alohan'ny hividianana, manaova fanadihadiana eny an-tsena mety, manorata drafi-pividianana, miantsena manodidina, ary mifidiana vokatra avo lenta sy mora vidy. Ahenao ny vidin'ny fampiasam-bola amin'ny fisafidianana sy fividianana fitaovana.
2. Araka ny fepetra takiana amin'ny herin'ny fitaovana, ny ankehitriny, sns, ny fampiasam-bola mitovy amin'izany dia ampiasaina, tsy handany ny angovo tsy misy ilana azy ireo fitaovana, ary hamonjy ny fako angovo amin'ny fotodrafitrasa fanampiny amin'ny fitaovana.
3. Araho ny fepetra takiana mandritra ny fametrahana sy ny fampiasana, ahena ny fisehoan'ny tsy fahombiazana mandritra ny fametrahana sy ny fampiasana, miantoka ny fandriam-pahalemana sy ara-dalàna ny fanasana atody, mampihena ny mety ho fikojakojana ny fitaovana, ary mampihena ny vidin'ny fampiasana fitaovana.
4. Alohan'ny hampiasana ny fitaovana, zahao ny maha-azo antoka ny famatsiana herinaratra, switch, sns., Ahena ny fisian'ny tsy fahombiazan'ny fiarovana ampiasain'ny fitaovana, manitatra ny androm-piainan'ny fitaovana ary mampihena ny fandaniana amin'ny fampiharana ny fitaovana.
5. Zahao tsy tapaka ireo fitaovana, manatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny fanamboarana sy ny fikojakojana, fampiharana ny fampiharana azo antoka ny fitaovana arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fitaovana, ary mampihena ny vidin'ny fanamboarana sy fikojakojana ny fitaovana.
Ny milina fanasan-atody dia ny manome fitaovana fanadiovana ho an'ny tantsaha. Tsy mila manasa atody sy gana gana be dia be isan'andro amin'ny tanana, izay manatsara ny fahombiazan'ny asa sy miantoka ny kalitaon'ny atody. Ny fahafantarana ireo fomba etsy ambony dia afaka mamonjy fandaniana bebe kokoa isika.
Mpanamboatra masinina mamaky atody, Masinina manendaka atody nandrahoina, Masinina mamaky atody mandeha ho azy, Masinina fonosana atody, Hatching atody Packer, Masinina manasokajy sy milina fanangonana,